Tartankii Quraan Kariimka ee Ardeyda Magaalada Bosaaso oo la soo gabagabeeyay.[Masawiro]
Boosaaso − Mu’asasada dacwada iyo horimarinta ee Alminhaaj qaybta gobolka Bari ayaa si rasmi ah usoo gabagabeysay tartankii qur’aan akhriska ee Ardayda Magaalada Boosaaso. Xaflada lagu soo afmeerayay Tartanka Quraan Kariimka ee Ardeyda Magaalada Bosaso oo ka dhacday Masjidka Wayn ee Al- Rowda ayaa waxaa Abaalmarinno kala duwan iyo lacag cadaan ah lagu gudoonsiiyay ardeydii kaalimaha hore ka galay tartanka.
Tartankaan lagu soo gaba gabeeyay magaalada Boosaaso ayaa ah tartan Qur’aan akhris ah oo sanad waliba bisha barakeysan ee Ramadaan loo qabto ardayda magaalada Boosaaso , kaas oo ay ardayda ugu saraysa ay ugu gudbayaan tartanka guud ee magaalooyinka puntland ee ka dhici doona magaalada garowe.
Gabagabadii xaflada ayaa halkaasi waxa looga dhawaaqay ardaydii ku guulaysatay kaalmaha 1aad , 2aad iyo 3aad, ee sadexda qaybood ee lagu tartamayay oo kala ahaa 30-ka Jus ee qur’aanka, 20 Jus , 10 Jus , iyo 5 Jus, iyagoona abaal marinno kala duwan lagu gudoonsiiyay. ardayda ku guulaysatayna kaalmaha koowaad ee afarta heer ee lagu kala tartamayay, ee u gudubtay tartanka heer puntland ee Garowe, waxay kala ahaayeen:
1. C/lahi C/kariim siciid, kana socday Dugsiga IBNU BAAZ.
1-C/shiid Jaamac Ismaaciil, kana socday Dugsiga ibinu Baaz.
1-Khaalid Sh Daahir Awcabdi, kana socday Dugsiga Daru Al-quraan
Mu’asasada dacwada iyo horimarinta
ee Alminhaaj, Boosaaso